Xusuuso inuu Ilaahay Ibraahim u ballanqaaday in Badbaadiyaha oo ah Farcanka ka iman doono wiilkiisa Isxaaq. Ibraahim iimaan weyn buu lahaa. Wuxuu aamminay haddii uu Isxaaq dhinto inuu Ilaahay soo sarakicin doono. Sidaa daraaddeed Ibraahim diyaar buu u ahaa inuu wiilkiisa allabbari ugu bixiyo. Haddaba isla markaas intuunan dilin wiilkiisa malaaʼig xagga Ilaahay ka timid baa ka qabatay. Ilaahay wuu ku ammaanay Ibraahim inuusan ka lexejeclaysan wiilkiisa. Ilaahay ninkan aamminka ah ballamihiisii mar labaad buu ugu celiyay. Ibraahim wuxuu ahaa saaxiibkii Yehowah.
↑ Eid al-Adha celebrated differently by Druze, Alawites (en)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciid_al-Adxaa&oldid=218383"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Oktoobar 2021, marka ee eheed 19:16.